Oromo News 07.15.21 | KWIT
Gara South Dakota kan fiduu karaa deemu kan jiran jiraattoni Iowa har’a galgala magaala Sioux City keessati kan dhaabatan ta’a. Native American kan ta’an south Dakota keesati gara lafa gosa isaanitti wayta deebian gareen askireen geggeesuf qarqaaru iran.
Miseensi kan Rosebud Sioux Tribe Pennsylvania keessati mana barumsa Carlisle Indian nitti ijoole sagal kan badaniif gara biyya isaani deebiuu jiruu. Dhalattoonin Iowa garee gosoo walitti deebisuu fi rabbiin kadhachuu bakka yaadanitti guyyaa har’a Tama fi Sioux City keessati dhaabachuu murteesani jiran. Garee Sioux City dhaan halkan har’aa 8;00 bakka parkii War Eagle jedhamu rabiin kan kadhatan ta’a.
Northeast qaccee Nebraska keessa kan jiran ogeeyyoni manneen barumsa naanicha keessati filannoo ballots kan godhame irrati sagalee himu jira, sagalee tokko kan qophaahe fi kan mormuu erga addaan baadan booda. Norfolk Daily News akka gabaasanitti hojattooni filannoo Cedar County filannoo kibxata godhamuun kan Laurel-Concord-Coleridge mana public school waaye filannoo booda irrati qarqaarudhan waraqata 596 wayta deegaran yoo tau wayta lakkaahan 595 tauu irrati mormanii jiru. Irra deebiame guyyaa harbaa lakkaawame ture.
Nebraska-Lincon bara 2021 bakka qonnaa Nebraska Real Estate Market Survey qorannoo gabaaya irrati godheen gabaasa akka mulisetti Nebraska keessati lafto qotan waggaa kana keessa harka 6% olgudatte ira.biyyati keessati lafti ag land tokko $2,895 akka tae himan, garuu state keessati bakka adda addaati gara gara.